फागुन २४ देखि भरतपुर गोल्डकप | Samabesi Khabar
फागुन २४ देखि भरतपुर गोल्डकप
गतवर्षको पुरस्कार राशीमा ४ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेर दोस्रो भरतपुर गोल्डकप आयोजना गरिँदैछ । गतवर्ष विजेतालाई ६ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिइएकोमा यसवर्ष भने १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
ए.जे. इन्टरनेशनलले गोल्डकपको आयोजना गर्न लागेको हो । उपविजेता टोलीले नगद ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ । यो गतवर्षको भन्दा २ लाख रुपैयाँ बढी हो । मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ए.जे. इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं गोल्डकपका संयोजक आलोकप्रताप राणाले आगामी फागुन २४ देखि चैत ३ गतेसम्म प्रतियोगिता गर्न लागिएको बताए ।
पहिलो गोल्डकपमा विजेताले नगद ६ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए । दोस्रो पुरस्कार राशी ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख पु¥याइएको छ । गोल्डकपको विजेताले पाउने पुरस्कार राशी मोफसलकै ठूलोमध्येमा पर्ने आयोजकको दावी छ । ‘खेलकुदबाटै चितवनलाई चिनाउन चाहन्छौ”, संयोजक राणाले भने, ‘ए डिभिजनका टोलीहरु उतारेर गोल्डकप गरिनेछ ।’
उनका अनुसार ६ वटा ए डिभिजन क्लबसहित ४ वटा जिल्ला क्लब गरी कूल १० टिम सहभागी हुनेछन् । तर, सहभागीको अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी छ । अहिले ए डिभिजन लीग जारी रहेकाले क्लबको टुंगो लाग्न समय लाग्ने संयोजक राणाले बताए । विभागीय
त्रिभुवन आर्मी क्लब , नेपाल पुलिस क्लब, रुस्लान थ्रीस्टार क्लब, संकटा क्लबलगायत टिम सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छ ।
फागुनको पहिलो साता ए डिभिजन लीग सकिँदै छ । गोल्डकपको प्रत्येक दिन म्यान अफ दी म्याच हुने खेलाडीले नगद २० हजार, विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई २० हजार, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । क्याम्पाचौरमा हुने गोल्डकप हेर्नका लागि २ सय जना भीआईपी प्याराफिट र ३ हजार जना सर्वसाधारण अट्ने प्याराफिट निर्माण गरिने चितवन फूटबल संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण कार्कीले बताए ।